China 330kV double loop terminal tower ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ | XY မျှော်စင်
ဘာကြောင့် XY Tower လဲ။
အခြေခံအဆောက်အဦ ၏ XY မျှော်စင်：
၁။ ဖောက်သည် ဧည့်ခံရေး ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် XY Tower သို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ ၂-၃ ဦး သုံးရက်နေထိုင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို အခမဲ့ပေးဆောင်လိုပါသည်။
2၊ အစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းမျှော်စင်ဝန်ဆောင်မှု။ ဖောက်သည်များသည် အစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းမျှော်စင်ဝန်ဆောင်မှုကို လိုအပ်သရွေ့ စက်ရုံသို့လာရောက်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဖောက်သည်များသည် အစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းမျှော်စင်ကို လုပ်ဆောင်ပြီး နောင်အကိုးအကားအတွက် ဗီဒီယိုတစ်ခုယူပါမည်။
3၊ နေ့စဉ်မွမ်းမံမှုဝန်ဆောင်မှု: စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ QC၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှပုဂ္ဂိုလ်များပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ဤသီးသန့်အဖွဲ့သည် WhatsApp သို့မဟုတ် WeChat ၏ အုပ်စုချတ်မှတစ်ဆင့် နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများထံမှ မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆို အချိန်မီဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကို ဆက်လက်ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်မှုသေချာစေရန် 4.5% ပိုသော bolts နှင့် အခွံမာသီးများကို အခမဲ့ပေးပါမည်။
5၊ ထုတ်ကုန်များမှလွဲ၍ XY Tower သည် အောက်ပါလက်မှတ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
.XY Tower Raw Material Reinspection အစီရင်ခံစာ
QC အဖွဲ့ထံမှ .Tower အစိတ်အပိုင်းများ စစ်ဆေးရေးမှတ်တမ်းများ
.XY Tower အရည်အချင်းပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များသည် စက်ရုံလက်မှတ်ဟောင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
.XY Tower Qualified Galvanized လက်မှတ်
XY Tower တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် အရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် အလွန်တင်းကျပ်သော စမ်းသပ်ပရိုတိုကောတစ်ခု ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးပါသည်။
1. ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (Ladle Analysis)
2. Tensile စမ်းသပ်မှုများ
1. Proof Load စမ်းသပ်ခြင်း။
2. Ultimate Tensile Strength စမ်းသပ်မှု
3. eccentric load အောက်တွင် Ultimate tensile strength test
4. အအေးဓာတ်ကို စမ်းသပ်ပါ။
6. Galvanizing စမ်းသပ်ခြင်း။
အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို စနစ်တကျ နံပါတ်တပ်ပြီး ထုပ်ပိုးထားပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှ ပျောက်ဆုံးမသွားဘဲ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်ရမည်ဟု အာမခံပါသည်။
ယခင်- 500kV double loop strain tower
နောက်တစ်ခု: 330kV double loop Y-type line tower
Transmission Tower ဒီဇိုင်း